indawo yakho ye-e-yorhwebo-i-Amazon, i-Ebay, i-Allegro kunye ne-Etsy ene-Propar E-export
Ipropathi E-Commerce Umdibaniso
Lawula iindawo zentengiso zasekhaya nezamazwe aphesheya kwindawo yakho ye-e-commerce ngePropars
Iimveliso / iiodolo ezorhwebo
Kulula kakhulu ukuthumela ngaphandle kwi-e-commerce yakho kunye nePropars!
Zonke izitokhwe zilandelwa ngokuzenzekelayo. Ixabiso kunye notshintsho lwesitokhwe lubonakaliswa kwangoko.
Ungadlulisela iimveliso zakho kwindawo yakho ye-e-commerce kwiPropars ngeXML.
Ngokwendlela yodidi kwindawo yakho ye-e-commerce, ungavula iimveliso zakho ezithengiswayo kwiindawo zentengiso.
Ngohlaziyo oluzenzekelayo, iimveliso ezisandula ukongezwa kwindawo yakho ye-e-commerce ziboniswa kwiiPropars, kwaye iivenkile zakho kunye neestokhwe kwindawo yentengiso ziyahlaziywa.
Unokwenza utshintsho lwesitokhwe kunye namaxabiso ngokugcina indawo yakho ye-e-commerce ihlaziyiwe.
Utshintsho lwamaxabiso olwenzayo kwindawo yakho ye-e-commerce lubonakaliswa kwangoko kwindawo yentengiso apho kuthengiswa khona imveliso.
Lawula i-e-commerce kwiscreen esinye kunye nePropars yokuthengisa iindawo zentengiso
Qokelela zonke iiodolo zakho kwiscreen esinye, i-invoyisi ngokucofa kanye! Inokukhupha ii-invoyisi ezininzi kwii-odolo ezivela kwiindawo zentengiso kunye ne-e-commerce site; Ungayiprinta ifom yempahla eninzi.